Kenya: Gudoomiyihii degmada Lamu oo maxkamad la saarayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya: Gudoomiyihii degmada Lamu oo maxkamad la saarayo
Lamu – Mareeg.com: Dowladda Kenya ayaa xabsiga dhigtay gudoomiyihii degmada Lamu ee gobolka Xeebta Ciisa Timamay, halkaas deegaano hoostaga oo ay ka mid tahay magaalada Mpeketoni Alshabaab dad badan ku laayeen.
Gudoomiyaha ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiis ah maxkamad la horkeeno kadib markii ay ciidamada amaanka xireen maalinimadii shalay oo arbaco aheyd.
Lamu Ciisa Timamay ayaa la xiray xalay kadib markii ay wareysi la yeesheen hay’ada nabadsugida Kenya, waxaana Guddoomiyaha loo dhaadhiciyey xabsi ku yaal magaalada xeebta ku taal ee Mombasa, caasimada labaad ee Kenya.
Guddoomiyaha Lamu ayaa laga wareystay weeraradii is xig-xigay ee ka dhacay tuulooyin iyo magaalooyin hoos yimaada degmada Lamu oo ay kamid tahay magaalada Mpeketoni oo horaantii bishan weerar ka dhacay lagu dilay dad ka badan 70 qof.
Inkastoo weerarkii Mpeketoni ay sheegteen Alshabaab ayaa hada Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in weeraradaasi ay salka ku hayaan arrimo siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu baro kiciyo qaar kamid ah beelaha ku dhaqan degmada Lamu.
Qaar kamid ah Saraakiisha amniga ee degmada Lamu ayaa xilalkii laga qaaday, iyadoo ay dowlad weli wax faah faahin ah kasoo saarin baaritaanka ay kuwado weeraradii ka dhacay Lamu.
Degmada Lamu oo ku dhowr xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhowr jeer Alshabaab weerareen, waxeyna ku laayeen dad badan oo shacab ahaa.